मोटो भएर हैरान हुनुहुन्छ? रातको समयमा भुलेर पनि नखानुहोस यि चिज – दैनिक नेपाल न्युज
मोटो भएर हैरान हुनुहुन्छ? रातको समयमा भुलेर पनि नखानुहोस यि चिज
पिज्जा– हर उमेर तहका मानिसका लागी पिज्जा लोकप्रिय खानेकुरा हो । तर यसलाई रातीमा खानुा राम्रो मानिदैन् किनकी यसमा चिजको मात्रा बढी हुन्छ । साथै पिज्जामा चिनी र रिफाइन कार्ब्स हुन्छ जसका कारण तौल बढ्छ ।
नट्स – बादाम, अखरोट, काजू या पिस्ता जस्ता खाने कुरा स्वास्थका लागी अत्यन्तै लाभदायक हुन्छ । यि खाने कुरामा क्यालोरी पनि उत्तिकै मात्रामा हुन्छ । त्यसैले पनि सुत्ने बेला यि कुरा सेबन गर्न हुँदैन् किनकी सुत्ने बेला शारीरीक गतिबिधी हुँदैन् । त्यसैले सुत्ने बेला यि खाने कुराबाट टाढै रहन पर्छ ।
फ्रूट जूस – सुत्ने बेला जु को सेबन गर्न हुँदैन् । बजारमा पायने जुसमा चिनी र सोडा रहेको हुन्छ ।यसका साथ फलफुलमा पाइने अबश्यक तत्व पनि नस्ट हुन्छ । त्यसैले फ्रूट जूस रातमा मात्र होइन दिनमा पनि सेबन गर्न हुँदैन् । यदि आमी सँग जसर भए घरमै बनाएर खाँदा राम्रो हुन्छ ।
कर्णाली प्रदेश प्रमुखलाई पञ्चेबाजा सहित गृहनगरमा स्वागत